Piston mmebi ụdị na-akpata nke haịdrọlik emebi?
1. formsdị isi nke mmebi piston: (1) Ichacha ihu; (2) A gbajiri pistin; (3) Mgbawa na chipping na-eme 2.Gịnị bụ ihe na-akpata mmebi piston? ...GỤKWUO »
Daalụ maka nkwado gị na Yantai Jiwei na afọ gara aga
Post oge: Dec-24-2020
Daalụ maka nkwado gị na Yantai Jiwei na afọ gara aga. Iji gosipụta ezigbo ekele na ekele anyị, Yantai Jiwei kwuru na ị nwere ike ịnụ ụtọ ọnụahịa dị mkpa ma ọ bụrụ na ị zụrụ HMB haịdrọlik na ngwaahịa ndị metụtara ya n'oge oge ekeresimesi. Maka ozi ego zuru ezu, biko ...GỤKWUO »
Post oge: Nov-09-2020
Yantai Jiwei 2020 (Summer) "Cohesion, Communication, Cooperation" Team Buliding Activity On 11th July, 2020, HMB mgbakwunye factory haziri Team Buliding Activity ， Ọ nwere ike ọ bụghị naanị izuike ma dịrị n'otu anyị otu, kamakwa kwe ka onye ọ bụla nke u ...GỤKWUO »
Emechara Excon India 2019 na 14th Disemba, ekele maka ndị ahịa anyị niile ndị gara leta HMB site n'ebe dị anya, na-ekele maka iguzosi ike n'ihe ha nye HMB hydraulic breaker. N'ime ihe ngosi ụbọchị ise a, ndị otu HMB India natara ihe karịrị ndị ahịa 150 sitere na mpaghara dị iche iche ...GỤKWUO »
The Middle East Concrete 2019 / The Big 5 Heavy 2019, nke emere na 25-28 Nov 2019 na Dubai United Arab Emirates, bịara na njedebe. Tupu mbido ihe ngosi ahụ, Yantai Jiwei mere nkwadebe zuru oke maka ngosi ahụ. Anyị na-etinye mma mbụ, mana anyị agaghị ...GỤKWUO »